Sida loo sameeyo Xubin xisbi | Christa for BET
Sida loo sameeyo Xubin xisbi
| About the campaign, Get involved, Soomaaliga
Isdiiwaangasho halkaan ka hor Abril 30
Rank Christa # 1.
Ha darajaynin ama ha u codayn murashax aanad taageersanayn.
Wuxuu noqdaa wufuud kaqeyb galaya shirweynaha Magaalada.
Xulo ergooyinka aad rumeysan tahay inay taageeri doonaan ansixinta Christa ee shirweynaha Magaalada.
Markaad iska diwwaan geliso xubin xisbi, waxaa laguu soo diri doonaa xiriiriye ee foomka internetka ah. Foomka ayaa kuu oggolaanaya inaad
• Xulato xubin xisbi hoose sida ku cad murashaxiinta (yada) aad doorbideyso.
• Magacaabid wakiil ahaan magaalada iyo shirarka xaafadaha.
Bisha Maajo, wufuudda ka qaybgalaysa shirarka ayaa laga dooran doonaa kuwa hoose.
Wufuuddaas ayaa go’aansada qofka hela oggolaanshaha DFL.
Sug, Xubnaha xisbiga hoose?!
Xubin xisbiyeedka waa sida kaqeybgalayaasha xubnaha xisbiga ay u abaabulaan si wadajir ah si ay u sheegaan cida ay rabaan in xisbigu ansaxiyo.
Wadahadalka shaqsi ahaaneed, kani wuxuu umuuqdaa dad isku urursanaya qaybaha kala duwan ee qolka, iyagoo tirinaya inta ay le’egyihiin kooxahoodu, ka dibna kooxo yar yar ay kubiiri doonaan kuwa waawayn si ay u noqdaan ‘macquul ah’ (taas oo ah, mid weyn oo ku filan in xaq loo yeesho In la doorto ugu yaraan hal ergo oo shirwaynaha magaalada ah).
Khadka tooska ah, iskuduwaha hoose wuxuu umuuqdaa codbixin xulasho xulasho leh Cod bixiye ahaan, istiraatiijiyaddu waa isku mid: waxaad dooneysaa inaad darajadaada koowaad siiso qofka aad u maleyneyso inuu aad ugu baahan yahay taageeradaada.
Marka waa inaad tixgelisaa inaad ku kala sareysid tartamada ‘downballot’ -ka ugu sarreeya – ku qiimee BET-ga aad doorbideyso iyo murashaxiinta (kuraasta guddiga baarkinka) ka sarreeya murashaxa duqa aad doorbideyso. Haddii tartamadaas hoos loo qoondeeyo aysan keenin wax-ka-qabashada hoose, wali waad ku sii fududaan doontaa heerkaaga hoose ee wax-ku-ool ah ee suurto-gal ah-badanaa musharaxa duqa magaalada.
Musharaxna aadan taageerin darajo ha siin! Waa caadi in aan la isticmaalin dhammaan darajooyinka la heli karo.
Waa kuwan tusaale ka mid ah waxaas oo u ekaan kara:
Magacyadu waxay u soo muuqan doonaan si aan kala sooc lahayn oo ku yaal warqadaha cod-bixinta Si taxaddar leh u guji.
Mar dambe ayaad u codeyn doontaa ergooyinka shaqsiyaadka ah – kaqeybgalayaasha kale ee caucus ee xaafadaada — xaafadaada hoose ee ugu macquulsan uguna macquulsan. Wufuuddu waa dadka u codayn doona ansaxinta DFL.
Si aad isugu magacaawdo in aad wakiil ka noqoto shirwaynaha magaalada, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad doorato labadan ikhtiyaar ee soo socota ka hor intaadan gujin “xiga”.
Noqo wakiil ka socda shirkii magaalada-waxay qaadan doontaa daqiiqado halkii maalin dhan ee noloshaada.
Kadib, hubi inaad xaqiijiso is-magacaabid ahaan wakiil ahaan.
Taasina waa sida loo wada hadlo, si looga qaybqaato abuurista Magaalada aad rabto inaad aragto, iyo inaad taageerto Christa!
Kadib markaad adigu isu magacowdo inaad noqoto ergo, waxaa lagu weydiin doonaa inaad bixiso qoraal kooban oo lagu taageerayo inaad tahay ergo Tixgeli tan ‘hadalkaaga jirid’. U sheeg deriskaaga waxa aad qaddarinayso iyo sababta aad iyaga iyo danahooda ugu meteli lahayd si wanaagsan shirka.
Inta udhaxeysa Maajo 12 iyo 18 waxaad awoodi doontaa inaad doorato wufuud ka socota heerkaaga hoose ee hoose si aad uga qaybgasho shirarka Magaalada. Ergooyinkan la doortay waa dadka u codeyn doona ansixinta DFL.Waxaa laguu soo diri doonaa xiriiriye warqad codbixin ah. Buuxi oo soo gudbi illaa 18-ka Maajo Haddii aad noqotid iyo in kale adigu adigu ergo, habka ugu wanaagsan ee aad ugu taageeri karto Christa cod-bixintaada waa xulashada wufuud aad u maleyneyso inay taageeri doonaan ansixinta Christa ee shirweynaha Magaalada.
Candidate Q & A, part 5 →